मुखको हड्डी हराउने समस्या ‘ओस्टियोपोरोसिस’, कसरी जोगिने? :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
कमला गुरुङ सोमबार, पुस २७, २०७७, ०७:००:००
काठमाडौं- धादिङका ३० वर्षीय एक युवकको दाँत हल्लिने समस्या थियो। विभिन्न क्लिनिकमा उनले दाँतको उपचार गराउन थालेको करिब चार वर्ष पनि भयो। तर दाँत हल्लिने समस्याले सताउन छाडेन।
समस्या २० को १९ नभएपछि उनी दाँतको उपचारका लागि काठमाडौंको एक अस्पताल पुगे। मुखको एक्स–रे गरियो। त्यसपछि मात्र थाहा भयो, उनको मुखमा रहेको हड्डी खिइएर हराउने अवस्थामा पुगिसकेको रहेछ। उनी चुरोट अनि सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन नगर्ने व्यक्ति। बिहान–बेलुकी राम्रोसँग दाँत पनि सफा गर्थे। उनको शरीरमा भिटामिन डी र क्याल्सियमको अत्यन्तै कमी थियो।
काठमाडौंकी ५० वर्षीय एक महिलाको दाँतमा किरा लाग्ने समस्या थियो। दाँत हल्लिने समस्या भने थिएन। चिकित्सकको सल्लाह अनुसार उनले मुखको एक्स–रे गरिन्। पत्ता लाग्यो, उसको हड्डीमा क्याल्सियमको मात्रा अत्यन्तै कम थियो। हड्डी खिइसकेको त थिएन। तर खिइने पहिलो चरणमा भने थियो। उनीहरु दुवैको समस्या थियो– ओस्टोपोरोसिस।
के हो ओस्टियोपोरोसिस?
सामान्यतयाः मुखको समस्या भन्ने बित्तिकै दाँतमा किरा लाग्ने, रगत बग्ने, गिजा सुन्निने अनि हल्लिने भन्ने अधिकांशको बुझाइ छ। तर दाँतलाई अडाएर राख्ने हड्डीको बारेमा थाहा हुने सायदै कम होलान्।
दाँतलाई हड्डीले अडाएर अर्थात् स्थिर बनाएर राख्ने गर्छ। दाँतको जरा हड्डीभित्र अडिएर बसेको हुन्छ। हड्डीको सहायताले मुखमा दाँत अडिएको हुन्छ। यही हड्डी विभिन्न कारणले विस्तारै खिइँदै जान्छ र केही समयपछि हराउँछ, यो समस्यालाई मुखको ओस्टोपोरोसिस भनिन्छ।
ओस्टियोपोरोसिस हुँदा हड्डी विस्तारै खिइँदै जाने कान्तिपुर डेन्टल हस्पिटलका ओरल मेडिसिन एण्ड रेडियोलोजी विभाग प्रमुख डा अंकित शाहले बताए।
ओस्टियोपोरोसिसको समस्या शरीरका विभिन्न भागमा देखिन्छ। जसमध्ये दाँतको हड्डी खिइनु पनि एक हो। हड्डी खिइँदै गएपछि दाँत हल्लिन थाल्छ र झर्छ।
यो समस्या नेपालमा वर्षेनी बढ्दो छ। तर यो समस्या बारे धेरैलाई जानकारी छैन। डा अंकितले भने, ‘मुखको समस्या भन्ने बित्तिकै धेरैले दाँत किराले खाने, गिजा सुन्निने मात्र बुझ्छन्। तर मुखको हड्डी खिइँदै हराउँछ भन्ने धेरैलाई थाहा छैन।’
भिटामिन डी र क्याल्सियमको कमी ओस्टियोपोरोसिस हुनुको मुख्य कारण मानिन्छ। चिकित्सकका अनुसार ओस्टियोपोरोसिसको समस्या व्यक्तिको जीवनशैलीसँग धेरै जोडिएको हुन्छ। हामी कस्तो जीवनशैली अपनाउँदैछौ यसले धेरै नै फरक पार्छ।
राम्रोसँग मुखको सरसफाइ नगर्दा र विभिन्न संक्रमणले ओस्टियोपोरोसिसको समस्या निम्त्याउने दन्तरोग विशेष डा प्रतीक्षा श्रेष्ठले बताइन्। उनले भनिन्, ‘मुखमा हुने विभिन्न संक्रमणले गिजालाई सुन्नाइदिन्छ। गिजाको संक्रमणले पनि विस्तारै हड्डी खियाउँदै लैजान सक्छ।’
चुरोट अनि सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग गर्ने समूह पनि ओस्टियोपोरोसिसको जोखिममा पर्छन्। चिकित्सकका अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थले हड्डीलाई खियाउने गर्छन्।
यो समस्याले महिलालाई बढी सताउने गरेको उनले बताइन्। विशेषगरी ४० वर्ष उमेर माथिका महिलामा ओस्टियोपोरोसिसको जोखिम धेरै हुन्छ।
डा अंकित भन्छन्, ‘४० वर्ष कटेका र महिनावारी सुकेका महिलामा इस्ट्रोजन हर्मोनको कमी हुन्छ। यो हर्मोनले हड्डीलाई स्वस्थ राख्ने पनि काम गर्छ।’ मधुमेह र ल्युकेमियाका बिरामीमा यो जोखिममा पर्छन्।
पछिल्लो समय १५÷१६ वर्षका युवामा पनि भिटामिन डी र क्याल्सियमको कमी हुने गरेको पाइएको उनले बताए।
ओस्टियोपोरोसिसको समस्या एक्स–रे गरेपछि मात्रा थाहा पाउन सकिन्छ। एक्स–रे बिना समस्या र हड्डीको अवस्थाबारे थाहा पाउन नसकिने उनले बताए। एक्स–रेको सहायताले मात्र दाँतको हड्डी कति खिइसकेको हो भनेर पत्ता लगाउन सकिन्छ तर
अधिकांश बिरामीले मुखको एक्स–रे गर्न नमान्ने गरेको उनले बताए।
‘बिरामी दाँत हल्लिएर आएको हुन्छ, गिजा सुन्निएको हुन्छ। हामी एक्स–रे गर्न सुझाव दिन्छौं तर बिरामीले एक्स–रे गर्नै मान्दैन,’ उनले भने।
दाँत हल्लिनु नै यसको मुख्य लक्षण हो। कुनै समय बिना कारण पनि दाँत हल्लिने गर्छ। समस्या यकिन गर्न एक्स–रे नै गर्र्नुपर्ने डा शाहले सुझाव दिए।
बिरामीहरु समस्या बढेपछि मात्र अस्पताल आउने गरेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार अधिकांश मानिस हड्डी खिइन थालेपछि मात्र अस्पताल धाउँछन्।
धेरैलाई यसबारे थाहा नभएकाले समस्या निदान नहुनु नै चुनौतीपूर्ण रहेको उनले बताए। उनले भने, ‘अधिकांश बिरामी हड्डी खिइन थालेपछि, हराएपछि मात्र अस्पताल आउँछन्। यो समस्या समयमै निदान गर्नु नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती छ।’
ओस्टियोपोरोसिसबाट बच्न प्रत्येक ६÷६ महिनामा दाँतको परीक्षण र एक्स–रे गनुपर्ने चिकित्सक सुझाव दिन्छन्। शरीरमा भिटामिन डी र क्याल्सियमको मात्रा पुरा गर्नु पनि आवश्यक छ।
चिकित्सकका अनुसार एक व्यक्तिको शरीरमा दैनिक १२ सय एमजी भिटामिन डी आवश्यक पर्छ। यसो भन्दै आफूखुसी बिना परीक्षण भिटामिन डी र क्याल्सियम खान नहुने डा श्रेष्ठले बताइन्।
अधिकांशले दाँत निकालेपछि नयाँ दाँत नहाल्ने गर्छन् तर यसो गर्दा समस्या झन् बढेर जाने डा शाहले बताए।
दाँत निकालेपछि नयाँ दाँत अनिवार्य रुपमा हाल्नुपर्ने उनको सुझाव छ। भन्छन्, ‘धेरैले दाँत झिकेपछि नयाँ दाँत हाल्दैनन्। जसले खाली भएको ठाउँमा हड्डी विस्तारै तल जान थाल्छ र पछि समस्या निकाल्छ।’
ओस्टियोपोरोसिसको समस्याबाट बच्न भिटामिन डी, क्याल्सियम र हड्डीको परीक्षण गराउनुपर्छ। मधुमेहका बिरामीले पनि सावधानी अपनाउनैपर्छ। मधुमहेका बिरामीलाई मुखको संक्रमण हुने जोखिम भएकाले सावधानी अपनाउनुपर्ने उनले बताए।
इस्ट्रोजन हर्मोन कमी भएका बिरामीले चिकित्सकको सल्लाह अनुसार मात्र हर्मोन बढाउने औषधि लिनुपर्छ। समस्याको कारण अनुसार पनि बिरामीको उपचार हुने डा शाहले बताए।
अस्टोपोरोसिसको समस्या भएपछि दाँतहरु हल्लिन्छन् र नयाँ दाँत हाले पनि त्यसले सपोर्ट गर्दैन। त्यसैले मुखको समस्या आउनुभन्दा पहिले सावधानी अपनाउनु आवश्यक छ। किनभने दाँत नयाँ फेर्न सकिन्छ तर हड्डी फेर्न सकिँदैन।